I-China Kitchenaid Dual Convection Countertop Oven Air Fryer, I-Countertop Toaster Oven Foodie Gril, I-Convection Oven nge-Glass Bowl, i-Air frier ene-360 ° ye-Anti-scalding Holder Holder, elula ukuyisebenzisa kunye necocekileyo, i-7L-10L i-CO-05DHA abavelisi kunye nababoneleli | UShao Hong
I-Kitchenaid Dual Convection Countertop Oven Air Fryer, i-Countertop Toaster Oven Foodie Gril, i-Convection Oven nge-Glass Bowl, i-Air frier ene-360 ° ye-Anti-scalding Holder Holder, elula ukuyisebenzisa kunye necocekileyo, i-7L-10L CO-05DHA
Ubungakanani obuqhelekileyo: 7L
Umthamo omkhulu: 10L
KULULA UKUSETYENZISWA:Ifreyimu yomoya exhotyiswe ngepaneli yokulawula ukubamba kanye. Vele uvule ifryer, ukhethe ukutya emva koko uqale. Ngcamla ukutya okumnandi okucoliweyo kufuna nje amanyathelo ama-3!
Kulula ukucoceka: Isitya seglasi sale ndawo yokuphaka i-oveni, tyibilika isitya seglasi emanzini kwaye uhlambe i-foam, ungathandi ifriji yomoya yeplastiki enentsalela engaphezulu.
I-360 ° ANTI-SCALDING: Le friji yomoya iza nesibane esipheleleyo sokukhusela ubushushu ngeglasi ukukhusela usapho lwakho kunye nabantwana bakho
UKUJIKELWA KWESIKHUNDLA SOKUSHISA NGOMOYA esingu-360 °Le oveni ishushu yomoya isebenzisa ubuchwephesha obutsha bokupheka ukutya nge-360 ° ukusasazwa komoya okhawulezayo okunciphisa ioyile namafutha angaphantsi kwama-85% kunoyilo lwasekhaya lweoyile. Pheka ukutya ngokulinganayo ngenxa yegolide-emdaka kunye neziphumo ezimnandi ngenkqubo yokujikeleza komoya esebenzayo.
Izixhobo eziqhelekileyo: Iilwimi, i-rack ephantsi, i-rack
Izixhobo zokhetho: Ipani ye-Pizza, isangqa se-Extender, ibhasikiti ye-Steam, i-Skewers, i-rock roast
Cooking Indawo yokudibanisa yokupheka eyi-7L.
◎ Ukuthobela umgangatho wokhuseleko we-GS A-13.
◎ Iyunithi epheleleyo yokupheka iyonke, yokupheka eyosiweyo, eyosiweyo, eyosiweyo, eyosiweyo, eyomphunga, eyosiweyo, eyomileyo, eyomileyo kunye nefry yomoya.
Programs Iinkqubo ezili-10 zokupheka kwangaphambili zokupheka iintlobo ezahlukeneyo zokutya.
Lid Isiciko seglasi esingacacanga kunye nesitya sokumelana nobushushu seglasi yokhuseleko lokutya.
◎ Ukupheka kwamaqondo obushushu ukusuka kuma-65ºC ukuya kuma-230ºC (149ºF - 446ºF).
Yandisa umthamo ngokongeza umsesane we-extender (ngokuzithandela).
Ukucima ngokuzenzekelayo xa sele isiciko siphakanyisiwe (Ngokuzithandela i-GS A-13 yokuhlanganisa).
Egqithileyo Ve ve ve ve alo ve ve ve ve
Okulandelayo: I-Toaster Oven Convection Super Wave Oven Halogen, i-infrared kunye ne-Convection Tech 1300watt 12L-17L, i-10 Recet Recipe, i-OEM kunye ne-ODM Factory
XL ve ve veve O oli-ngaphantsi kweFryer yomoya, 12L-17L, ...
U-Shaohong Air Fryer, isitovu seToptopop yeoven ...
Ve fryer yer aster oven oven yer yer yer yer yer yer
I-Shaohong air fryer rack yokuhanjiswa kwe-vene, 10 ...